Caruurta oo daawada lacag la’aan looga dhigayo | Somaliska
Ka bilaabata bisha Janaayo ee sanadka 2016 ayaa dhamaan caruurta ku nool Sweden ee da’dooda ka yartahay 18-sano waxay daawada ku heli doonaan lacag la’aan. Sharcigaan cusub ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen waalidiinta ku nool Sweden oo horay u bixin jiray lacag marka caruurta daawo loo soo qoro.
Sharciga oo uu baarlamaanka ansixiyay ayaa loogu talagalay in lagu mideeyo helitaanka daawada ee qoysaska kala dhaqaalaha duwan. Horay ayaa waalidiinta waxaa waajib ku ahaa in ay bixiyaan ugu badnaan 2200kr iyadoo markasta oo waalidka ay daawo lacag ka bixiyaan ay kaarar soo qaadanayeen. Hadda ayaa guud ahaan lacagtaas meesha laga saarayaa.
Waxaa sidoo kale sharcigaan qabanayaa caruurta magan-galyo doonka ah iyo dadka sharciga loo diiday ee da’dooda ka yartahay 18-sano ayaa iyagana daawada lacag la’aan ku heli doona. Daawada lacag la’aanta ayaa ah mida ay dhaqaatiirtu soo qoraan balse waxaan ku jirin daawo dhaqameedka iyo daawada sigaarka laysaga gooyo.
December 19, 2015 at 12:26
Waa Sheeko Waali ah, macaruurta Ayaa sagaar cabto Waa maxay daawada kuma jirto tan sigaar ka leesaga jaro kkkk
Abdifatax : si’gaar ka ah waye ama sida gaarka ah , amaba dawada fri resept ga ah waaye bro
Waxaa ay u fiicantahay dadka carruurta leh waana wax lagu farxo waayo sanad walbo qarash badan ayaa daawo nooga baxdo. Waxaa kale oo aan rajaynaa lacagaha ilkaha ee dadka waaweyn in nalaka dulqaado waayo qaali daweynta ilkaha.
ASC Dhamaan Asxaabta Sweden Waa Dowlada ugu Wanaagsan Xaquuqda Caruurta hadii Wax walba bilaash Looga dhigay waxan rajeenayaa sanadaha soo socdana inta dadka waa weyn Lagu dari doono insha allah Mida kale Sxb Abdulfitah Waa run Caruurta sigaar waa ay cabtaa oo qofkii 16 ama 17 jira sweden caruur ayuu xisaabsanyahay
asxaabta waxan ubahana by emailka sxda ah e migration ka qofkii kasayo ha ii so qoro fadlan